वास्तविक जीवनमा पनि चुरोट पिउँछन् यी बलिउड अभिनेत्री
मुम्बई, साउन १०
फिल्मको सुरूमै ‘धुम्रपान’ स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ’ भनेर लेखिएको हुन्छ। यतिमात्र है बलिउड कलाकारहरु खुलेरै धुम्रपानको विरोध गर्ने पनि गर्छन्। यस्तो भएपनि बलिउडमा धुम्रपान गर्ने अभिनेता-अभिनेत्रीहरुको कुनै कमी छैन्। शाहरूख खान, संजय दत्त, अजय देवगन, रणवीर कपुर जस्ता थुप्रै अभिनेता यस सूचिमा पर्छन।
अभिनेत्रीहरुको पनि सुचि अभिनेताहरुको भन्दा कम छैनन्। फिल्मको पर्दामात्र नभई वास्तविक जीवनमा पनि चुरोट सेवन गर्ने अभिनेत्रीहरु छन्। वास्तविक जीवनमा चुरोट सेवन गरिरहेको अवस्थामा बलिउड अभिनेत्रीहरु क्यामरामा कैद भएका छन्। यसमा ‘क्वीन’ अभिनेत्री कंगना रनौट, रानी मुखर्जी, करिश्मा तन्ना, किम शर्मा, सबाना आजमी, मनिषा कोइराला, सुस्मिता सेन आदि पर्छन्।
बलिउडका केही सफल अभिनेत्रीहरू पनि रक्सी र चुरोटको लतमा फसेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा खबर सार्वजनिक भएको छ। केही बलिउड अभिनेत्रीहरू विभिन्न लतको शिकार हुने गर्छन्। उनीहरु रक्सी तथा चुरोटको सहारा लिने गर्छन्।
रक्सी र चुरोटको यस्तो नशामा डुबेका कलाकारहरू लतबाट बाहिर आउन ठुलै मुल्य समेत चुकाउने गरेका छन्। केही यस्ता बलिउड अभिनेत्रीहरु कुलतमा फसे र आफ्नो ज्यान गुमाएका समेत छन्।
भारतीय फिल्म क्षेत्रमा बलियो अभिनय कला भएकी कोंकणा सेन कुनै समय रक्सी र चुरोटको लतमा फसेकी थिइन्। तर सन् २०१० मा जब उनी गर्भवती भइन् बच्चाको लागि भए पनि उनले चुरोट र रक्सी छोड्ने निर्णय गरिन्।
मिस युनिभर्सको ताज पहिरिएकी सुस्मिता चेक स्मोकरको रुपमा समेत परिचीत थिइन्। उनलाई बिटाउन अल्कोहलिको नामले समेत चिनिन्छ। तर उनले यस कुरालाई अस्विकार गर्दै आइरहेकी छिन्।
साउथ फिल्मकी सेक्स सिम्बोलको रुपमा परिचित चर्चीत अभिनेत्री सिल्क स्मिता रक्सीको लतमा नराम्रोसँग फसेकी थिइन् । जब उनलाई फिल्मका अफरहरु कम हुँदै गए उनी डिप्रेशनमा गएकी थिइन्। अन्तिम दिनहरुमा त उनी सेटमा नै रक्सी पिएर आउने गर्थिन्।
ट्रेजेटी क्विनको रुपमा परिचीत अभिनेत्री मिना कुमारी रक्सीको नशाको नराम्रो लत थियो। उनको लत यसरी बढ्यो कि उनको ३९ वर्षको उमेर ज्यादा रक्सीका कारण उनको मृत्यु भयो।
राखि गुल्जारले कुनै समय रक्सीलाई सबैभन्दा प्रिय साथी बनाएकी थिइन्। जब राखिका पतिले उनलाई धोका दिँदै मीना कुमारीसँग सम्बन्ध बनाए तब उनी रक्सीको नजिक भइन् । त्यही पिरलाई भुलाउन भए पनि उनी रक्सीको सहारा लिइन्।
यो कुरा सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला तर जया बच्चनलाई पनि रक्सीको लत थियो। उनी रक्सी एक समय अत्यन्त पिउने गरेको बताइएको थियो ।
मनिशा कोइराला आज लाखौ मानिसहरुका लागि प्रेरणाको श्रोत भएकी छिन् । तर, उनी एक समय चेन स्मोकरको रुपमा परिचीत थिइन्। उनलाई विभिन्न पार्टीमा रक्सी खाँदै रमाउँदै गरेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पनि देखाएका थिए । तर, उनले अब यी लत देखि परै बस्ने घोषणा समेत गरेकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, साउन १०, २०७४ ०७:३७:४८
अनुष्काले यसकारण ‘सारेगमप लिटिल च्याप्स’को शुटिङ छाडिन्
सलमान खानको बुवा बन्ने इच्छा !
अभिनेत्री श्रुती हसन प्रेमी कोर्सेललाई परिवारसँग भेटाउने तयारीमा
सलमानको सिफारिसमा बलिउडमा फिल्म पाएकी हैनन् नागिनकी मोनीले!
शाहरुखले अनुष्कालाई बनारसी पान खुवाएपछि !
बलिउड स्टार सलमान खानदेखि दीपिकासम्मका रोचक कुरा !